अवैध बाटोबाट अमेरिका, एजेन्टलाई बुझाएको करोडौं रकम स्वाहा ! | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार अवैध बाटोबाट अमेरिका, एजेन्टलाई बुझाएको करोडौं रकम स्वाहा !
२०७६, २९ मंसिर आईतवार ०८:३२
आर्थिक संकट टार्न र केही कमाउन श्रमिकको हैसियतमा कतार उड्दा बैरिया–७, रौतहटका मोहम्मद आफताब आलमले भर्खरै १२ पास गरेका थिए । स्थानीय एजेन्टलाई डेढ लाख रुपैयाँ बुझाएपछि उनको राहदानीमा पाँचवर्षे भिसा टाँसिएको थियो । ०७० माघ २६ मा कतार उडेका उनी पाँच वर्षपछि ०७५ माघ २८ मा स्वदेश फर्किए तर कतारबाट होइन, अमेरिकाबाट ।
खाडी पुगेका मोहम्मद कसरी अमेरिका पुगे ? अमेरिका छिरेका उनी किन फर्किए ? कतार–अमेरिका यात्रामा के भयो ? यी प्रश्नका उत्तरले अमेरिका छिर्ने हुटहुटीमा हन्डर, हिरासत र धोकाको हुन्डरीमा परेर घरखेत गुमाउन पुग्ने धेरै नेपालीको कथा बोल्छन् । पहिले उनकै कथा ।कतारमा मोहम्मदले एक फोन कम्पनीको सेल्स डिपार्टमेन्टमा काम पाएका थिए । पैसा ठीकै थियो, काम पनि उनका निम्ति उति गाह्रो थिएन।
त्यहाँ रहँदा बस्दा उनले आफूजस्तै एक बंगलादेशी कामदारलाई चिनेका थिए । एकदिन फेसबुक चलाइरहेका बेला थाहा पाए, केही दिनअघिसम्म आफ्नै छेउमा बस्ने बंगाली साथी अमेरिका छिरेछ । खुबै चासो राखेर उनले बंगाली साथीलाई फेसबुक म्यासेन्जरबाटै सोधे, ‘तिमी कसरी पुग्यौ अमेरिका ?’ एक बंगाली एजेन्टमार्फत मेक्सिको हुँदै अमेरिका छिरेको सुनाएर उसले मोहम्मदको इच्छा बुझे जसरी भन्यो, ‘तिमी पनि आउने भए त्यही एजेन्टलाई भेट ।’ कमाइको केही पैसा जोगाएका मोहम्मदलाई अमेरिका छिर्न पाए झनै धेरै कमाउन सकिन्थ्यो र जीवन सजिलो बन्थ्यो भन्ने लाग्यो । उनले मोहिब अली नामको बंगाली एजेन्टसँग सम्पर्क गरिहाले ।
Previous articleजब किशोरीले मुख्यमन्त्रीसँग भनिन् : ‘बिहे रोकिदिनुस्’
Next articleबैंकहरूलाई निशुल्क बिमाको प्रचार गर्न प्रतिबन्ध